सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फाइनलमा – Khel Dainik
सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फाइनलमा
पुष २३, २०७७ | (PostaComment)
बुटवल (खेलदैनिक) । प्रतियोगितामा शानदार प्रदर्शन गरिरहेका जोना ग्लोरीले निर्णायक दुई गोल गर्दा सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब, चितवन जारी शुद्धोदन गाउँपालिका आठौं फर्साटिकर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
बिहीबार शुद्धोदन–४ बर्मेलीटोल स्थित फर्साटिकर माविको खेलमैदानमा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा भरतपुरले चाँदनी युवा क्लब, दानापुरलाई २–० ले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
खेल शुरु भएको तेसे मिनटमै ग्लोरीले बक्स नजिकैबाट पहिलो गोलको खाता खोले । लगतै २४औं मिनटमा ग्लोरीले नै व्यक्तिगत दोस्रो गरे । पहिलो हाफमा भएको त्यो दुई गोल नै भरतपुरलाई फाइनलमा पुर्याउन प्रर्याप्त बन्यो । ग्लोरीले क्वाटरफाइनलमा पनि पाल्पा विरुद्ध प्रतियोगिता कै पहिलो ह्याट्रिक गरेका थिए ।
खेलमा भरतपुरले केही राम्रा अवसरहरुलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा गोलको अग्रता थप बढाउन सकेन । ५६औं मिनटमा रुमेश बर्तौलाको क्रस पासलाई फोडे फोफोनाले हेडर गर्दा बलले क्रसबारमा लागेर बाहिरिएको थियो । त्यसको दुई मिनट लगतै सुदान्स चौधरीले मिलाइदिएको सुन्दर पासलाई बक्स भित्र रहेका रुमेश बर्तौलाले सदुपयोग गर्न सकेनन् ।
दोस्रो हाफमा विपक्षीमाथि थप हावी बनेको भरतपुरले गोलका केही राम्रा अवसरहरुलाई चुकाउन पुग्यो । यद्यपि जितलाई भने आत्मसात गर्न सफल भयो । खेलको म्यान अफ द म्याच भरतपुर कै दुई गोलकर्ता जोना ग्लोरी घोषित भए ।
फाइनलमा भरतपुर र फूलबारी भिड्ने
प्रतियोगिता अन्तरगत बिहीबारको खेलसँगै फाइनल समिकरण पनि पूरा भएको छ । अब भरतपुरले उपाधिका लागि पुष २५ गते शनिबारका दिन फूलबारी गाईज, बुटवलको सामना गर्नेछ । स्मरणीय छ, फूलबारीले बुधबार मात्रै पहिलो सेमिफाइनलमा सुनौलो संगम युवा क्लबलाई ५–१ ले हराउँदै फाइनल स्थान सुरक्षित गरेको थियो ।
फर्साटिकर युवा क्लब, शुद्धोदन गाउँपालिका फर्साटिकरको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद २ लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले १ लाख प्राप्त गर्नेछ । प्रतियोगिता कै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले १० हजार हात पार्ने पनि आयोजक क्लबका अध्यक्ष मुकेश कुँवरले बताए ।
साथै प्रतियोगितामा व्यक्तिगत विधातर्फ पनि उत्कृष्ट हुने खेलाडीहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको प्रतियोगिता संयोजक टेकु भण्डारीले बताए ।
← शिशिर निर्णायक बन्दा सताक्षीधाम फाइनलमा हेटौडा गोल्डकपलाई भिडोलको साथ →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने पुष २३, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? पुष २३, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली पुष २३, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा पुष २३, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित पुष २३, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा पुष २३, २०७७